RSV: Fayraska aan wax badan laga aqoon ee carruurta ku dhaca - Bulsho News
RSV: Fayraska aan wax badan laga aqoon ee carruurta ku dhaca
Horraantii sanadkan 2021 shaqaalaha Isbitaalka Carruurta Maimonides ee Brooklyn, New York, ayaa dareemay nafis. Kiisaska Covid-19 ee magaalada ayaa hoos u sii dhacayay.
Sababo ka dhashay kala fogaanshaha bulshada, xirashada af-saabka iyo dhaqashada gacmaha, sidoo kale kiisaska xanuunnada kale sida hargabka ayaa yaraaday.
Balse bishii March tiro aad u badan oo carruur iyo dhallaan qunfacaya ah ayaa la keenayay isbitaalka, qaarkood waxay la harjadayeen neefsashada.
Waxaa ku dhacay RSV, o ah fayras ku dhaca neef-mareenka, waana fayras la arko xilliyada qaboobaha wuxuuna sababi karaa dhibaatooyin dhanka sambabbada ah. Xilligan sannadka, kiisaska RSV waxay ahaayeen inay yaraadaan. Balse taa beddelkeed, way kordhayeen.
Bilihii xigay, kiisaska kordhaya ee RSV ayaa lagu arkay koofurta Mareykanka, Switzerland, Japan iyo UK. Dhaqaatiirta ayaa sheegay in dabeecadda la yaabka leh ee fayraska ay u muuqato mid la mid ah tan Covid-19.
Sannadkii la soo dhaafay, xayiraadaha iyo tallaabooyinka faya-dhowrka ayaa hoos u dhigay faafitaanka coronavirus, iyo fayrasyada kale sida RSV. Carruurtu iskama difaaci karaan fayrasyadan.
Markii la dabciyay tallaabooyinkan, RSV ayaa ku dhacay dhallaan iyo carruur badan, taas oo keentay kororka fayraskan ee xilligan aan la fileyn.
Wuxuu noqday mid xilli walba oo sannadka ka mid ah ka yaabin kara qoysaska iyo isbitaallada. Dillaacitaanka fayraskan ee xilligan aan la fileyn ayaa keenay in ay buuxsamaan qeybaha la seexiyo carruurta uu ku dhaco.
Shaqaalaha isbitaallada, ayaa la kulmay xaalado aan caadi ahayn.
Fayraska (RSV) wuxuu sababaa in unugyada uu ku dhaco ay isku dhagaan
“Qeybteenna daryeelka gaarka ah ee ICU mar kale way buuxsantay. Balse marka maaha Covid, ee waa fayras kale,” ayay tiri Rabia Agha, oo ah agaasimaha qeybta xanuunnada faafa ee carruurta ee isbitaalka Maimonides.
Markii uu xanuunku aad u jiray, horraantii April, inta badan carruurtii la gelinayay ICU waxay qabeen RSV.
Daafaha dunida, fayraska ayaa saameyn ba’an ku yeeshay carruur yaryar oo bilooyin laga difaacayay xanuunnada faafa, haatanna uu si kedis ah ugu dhacay.
“Wuu naga yaabiyay. Waynu ogeyn inuu yahay wax la filan karo, balse uma qabin in tiradu sidaa u badnaan doonti,” ayuu yiri Christoph Berger, madaxa waaxda xanuunnada faafa ee Isbitaalka University Children’s Hospital ee magaalada Zurich.
Isbitaalkiisa, kiisaska RSV ayaa inta badan la arki jiray January, halka ay yaraan jireen bilaha xaagaga ee June ilaa August.
Sanadkan, wax kiisas ah lama arkin Gu’ga. Taas beddelkeed, waxay kiisasku kordheen June, waxayna July gaareen 183, tiradaas oo ka badan tii xilliyadii qaboobaha ee sanadkii hore.
“Waynu buuxnay, sariir walba bukaan ayaa jifay, taasina caqabad ayay ahayd,” ayuu yiri Berger oo dib u milicsanaya bishii July.
Isbitaalkiisa ayaa ku qasbanaaday in carruurta la xanuunsan RSV uu u wareejiyo isbitaallada kale ee firaaqada ah. Isbitaallo kale oo badan oo ku yaalla Switzerland ayaa la kulmay isla xaaladdaas.
RSV ayaa xagaagii dhibaato ka badan tan coronavirus ka geystay Switzerland. “Intii lagu guda jiray xilligaas ma aynaan arag kiisaska Covid,” ayuu yiri Berger.
Carruurtii yareyd ee isbitaalka loo geeyay Covid si deg deg ah ayay uga boodeen. “Kuwii qabay RSV muddo dheer ayay sii joogeen,” ayuu yiri.
Caabuqa RSV ma aha waxa dhiillada leh. Sida laga soo xigtay Xarunta Xakameynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Mareykanka, inta badan carruurta mar buu ku dhacaa marka ay gaaraan labo sano.
Inta badan waxaa lagu arkaa calaamado sida hargabka ah, sanka oo biyo ay ka dareerayaan iyo qufac, wayna ka caafimaadaan. Balse dhallaanka qaar iyo carruurta yar yar, wuxuu ku sababi karaa quuman, waxaana dhib ku noqon karta neefsashada.
Qiyaastii 1-2% boqolkiiba carruurta ay da’doodu ka yar tahay 6 bilood ee uu ku dhaco RSV ayaa loo qaadaa isbitaalka waxaana la siiyaa hawada oksojiinka si ay u soo kabtaan. Qaarkood ayaa u baahan kara tubooyinka quudinta. Marka ay caawinaaddaas helaan, intooda badan maalmo gudahood ayay ku caafimaadaan.
Kahor xanuunka safmarka ah ee coronavirus, isbitaallada ayaa u diyaar garoobi jiray kororka kiisaka RSV marka uu dhow yahay xilliga qaboobaha.
Bukaannada khatarta ugu badan ku jira sida carruurta xilligooda ka soo hormaray iyo kuwa qaba dhibaatooyinka dhanka wadnaha ayaa waxaa lagu dabiibi karaa palivizumab, waa tallaal difaac ah oo ka acawin kara inay fayraska la dagallamaan. Tallaalkan ayaa la siiyaa bil walba marka uu socdo fayraska RSV.
Carruurta aad ula xanuunsata RSV ayaa waxaa la siiyaa oksojiin badankoodna maalmo gudahood ayay ku bogsadaan
“Tallaabooyinkii loo dejiyay Covid dartood, dadku ma aysan kulmeyn, ma aysan safreyn, aad beyna uga taxadarayeen xirashada af-saabka iyo kala fogaanshaha,” ayay tiri Agha.
“Taasina waxay dhab ahaantii gacan ka geysatay xakameynta Covid iyo dhammaan fayrasyada kale. Sidaas darteed, hal xilli oo RSV ah ayaa gebi ahaanba la waayay. Haddii aad hal xilli ka badbaaddana, ma yeelaneysid difaac, hooyooyinkuna ma yeelanayaan difaac ay u gudbiyaan dhallaanka.”
Taas waxaa ka dhalanaya, in caruurta ay u nuglaadaan RSV marka ay xaaladdu caadi ku soo noqoto. Xog laga helay dalal kala duwan ayaa waxay taageereysaa fakradda ah yaraanta difaaca jirka haddii fayraska aan la arkin hal xilli.
“Kiisaska ugu badan waa carruurta ay da’doodu ka yar tahay hal sano, kuwaas ‘oo ka booday’ hal xilli oo RSV ah”, ayay saraakiisha Caafimaadka Bulshada England ku yiraahdeen email ay u soo direen BBC-da, kaas oo ay ku sharxayaan kororka kiisaska fayraska ee xagaagii lagu arkay qeybo ka mid ah England.
Carruurta qabta dhibaatooyinka caafimaad ee khatarta ugu jira RSV ayaa la siin karaa tallaal difaac ah
Su’aal muhiim ah oo la is weydiinayo ayaa ah in waxa arrintan ay uga dhigan tahay bilooyinka soo socda. Kororka xagaaga lama micno aha inaysan jirin doonin kiisas badan marka ay cimiladu isku beddesho qabow. Meelaha qaarna, kiisaska ayaa haatan uun kordhaya.
“RSV, iyo quumanka ay sababto, waa waxa ugu weyn ee ay haatan isbitaallada carruurtu isu diyaarinayaan, iyagoo filaya, haatanba arkay iyo ka dhursugaya,” ayay tiri Sophia Varadkar, oo ah agaasime ku xigeenka isbitaalka Great Ormond Street Hospital ee London.
Isbitaalkeeda, kiisaska ayaa sii kordhaya, waxayna fileysaa in toddobaadyada soo socda la arko kuwo kale oo badan. Kuwa xannaaneynaya dhallaanka, RSV wuxuu uga daran yahay Covid-19, ayay tiri Varadkar.
“Covid-ka carruurta, guud ahaan, ma aha xanuun daran. Carruur badan lama aysan xanuunsan runtii. RSV waa xanuun daran, [oo saameynaya] carruur badan, waanan ognahay in carruurtaas yar yar uu ka dhigi karo kuwo ildaran,” ayay tiri.
“Inta badan carruurta, wuxuu u noqon karaa xanuun aan darneyn, waaliddiintooda ayaa daryeeli kara, waxay keliya u baahan yihiin daryeel, quudin badan, waqti deggan, paracetamol haddii ay xummad heyso, intaas un bey u baahan yihiin,” ayay tiri Varadkar oo ku sugan London.
Balse haddii ilmuhu la dhibtoonayo neefta iyo wax cunidda, amaba uu waalidku dareemo inay wax khaldan yihiin, waa inay caawinaad raadsadaan, ayay tiri.
Isbitaalka Maimonides ee Brooklyn, haatan ma badna kororka kiisaska RSV. Balse Agha ayaa aaminsan in cashar weyn uu ugu jiro isbitaallada la qabsanaya saameynta ka dhalatay Covid-19.
“Waxa ay ina bartay waa inaad diyaar garowdaa,” ayay tiri Agha. “Arrimuhu ma aha sidii ay ahaan jireen labo sano kahor. Noloshu way is beddeshay, dunidu way is beddeshay, fayrasyadaanna way is beddelayaan oo waxay la imaanayaan qaabab aan la fileyn .”
South Korea launches panel to debate ‘living with...